Ihe mere Ukraine International Airlines PS752 ka emechibidoro Iran
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ihe mere Ukraine International Airlines PS752 ka emechibidoro Iran
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ na -agbasa ozi Iran • News • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche
N'ime esemokwu dị n'etiti Iran na United States, ndị agha Iran gbagburu ụgbọ elu Ukraine International Airlines Flight mgbe ọ gbasara na Teheran. Site na ndị njem 167 na ndị ọrụ itoolu nọ na ya, ụgbọ elu ụgbọ elu Ukraine International Airlines PS752 dara na mpụga ọdụ ụgbọ elu Imam Khomeini International nke Tehran na Jenụwarị 8, obere oge mgbe ụgbọ elu ahụ gasịrị.
Aviationtù Civil Aviation Organisation nke Islamic Republic of Iran (CAO.IRI) kwuru na nrụrụ aka nke usoro radar unit nke onye ọrụ ya bụ isi “njehie mmadụ” nke dugara na mberede ụgbọ elu ndị njem Ukraine na mbido Jenụwarị. Ọ were ruo na ngwụcha ọnwa Jenụwarị ruo mgbe ụgbọ elu European ụgbọ elu bidoro njem ka Iran.
Na nkwupụta ewepụtara na mbubreyo Satọde, nzukọ ahụ kwuru na ọdịda na sistemụ nchekwa ikuku na-eme n'ihi mmejọ mmadụ na ịgbaso usoro maka ịhazi radar, na-akpata "nje nrịgo 107" na sistemụ ahụ.
Ọ gbakwụnyere na njehie a “butere agbụ nke ihe ọghọm,” nke mechara bute njehie ndị ọzọ na nkeji tupu agbapụ ụgbọ elu ahụ gụnyere njirimara na-ezighi ezi nke ụgbọelu njem ahụ nke ezighi ezi maka ebumnuche ndị agha.
Nkwupụta ahụ kwuru na n'ihi nchigharị nke radar, onye ọrụ nchekwa ụgbọ elu kọwapụtara ụgbọ elu ndị njem ahụ dị ka ihe mgbaru ọsọ, nke na-abịaru Tehran site na ndịda ọdịda anyanwụ.
Ndị ọchịchị Iran kwenyere na ụgbọelu ahụ dara n'ihi njehie mmadụ n'oge mgbe nchebe ikuku nke Iran nọ na nche dị elu n'ihi ụba ọrụ ụgbọelu America na-akpata mbibi nke agha Iran na ọdụ ndị agha Iraq, nke nwere ụlọ njikọ ndị US ndị agha na mba Arab.
Ogbunigwe ahụ bịara mgbe ndị agha Amerịka na-eyi ọha egwu gburu Lieutenant General Qassem Soleimani, ọchịagha nke Quds Force nke Islamic Revolution Guards Corps (IRGC), ya na ndị ibe ya, na mpụga ọdụ ụgbọ elu mba Baghdad na ntụzịaka sitere n'aka Onye isi ala US Donald Trump.
N'ebe ọzọ na akwụkwọ CAO, nke abụghị akụkọ ikpeazụ banyere nchọpụta ihe mberede ahụ, ahụ kwuru na nke mbụ n'ime ogbunigwe abụọ agbapụrụ na ụgbọ elu ahụ chụrụ ya n'ọrụ site n'aka onye na-ahụ maka nchekwa ikuku nke mere omume "na-anataghị nzaghachi ọ bụla site na Coordination Center ”Nke ọ dabeere.
Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, agbapụ ụta nke abụọ ahụ ka sekọnd 30 gachara mgbe onye ọrụ nchekwa ikuku ahụ “hụrụ na achọpụtara na-aga n'ihu na njem ụgbọ elu ya.
Onye ọka iwu nke ndị agha maka ógbè Tehran, Gholamabbas Torkisaid, kwuru na mbubreyo ọnwa gara aga na ọdịda nke ụgbọ elu ndị njem Ukraine bụ nsonazụ nke mmadụ na akụkụ nke onye ọrụ nchekwa ikuku, na-achịkwa na enwere ike ịwakpo cyberattack ma ọ bụ ụdị ọ bụla ọzọ. sabotaji.
Ọ gbakwụnyere na otu onye na-ahụ maka ikuku ikuku na-ahụ maka mgbatu ahụ, n'ihi na onye ọrụ ya enwebeghị ike ịchọpụta ụzọ ugwu si n'ụzọ ziri ezi ma, dị ka ndị dị otú a, chọpụta ụgbọ elu ahụ dị ka ihe mgbaru ọsọ, nke na-abịaru Tehran site na ndịda ọdịda anyanwụ.
Njehie ọzọ, onye ọrụ ikpe ahụ kwuru, bụ na onye ọrụ ahụ echereghị iwu nke ndị isi ya mgbe o zipụchara ozi na ngalaba iwu wee gbaa mgboagha ahụ na mkpebi nke ya.
Mịnịsta Ofesi mba Iran bụ Mohammad Javad Zarif kwuru na June 22 na mba ahụ ga-eziga France "n'ime ụbọchị ole na ole sochirinụ" igbe ojii nke ụgbọ elu ndị njem Ukraine.
Zarif kwuru na Alakụba Alakụba agwaworị Ukraine na Tehran dị njikere idozi nsogbu niile gbasara iwu gbasara ọdachi ahụ, debe usoro maka ịkwụ ụgwọ ezinụlọ nke ndị ahụ metụtara, na ịkwụghachi ụgbọ elu ndị Ukraine maka ihe ahụ merenụ.
isi mmalite: Press TV